အပိုင်းအစများ သတ္တုလက်ကောက်၊ ဒေါင်လိုက် သတ္တုမဟုတ်သော ဘေစင်၊ သတ္တုကြိတ်စက် နှိပ်စက် - ထိပ်တန်း
ဟိုက်ဒရောလစ် အပိုင်းအစ သတ္တု စာနယ်ဇင်း အလူမီနီယမ် ညှပ်စက်
နည်းလမ်းများ စက်ကိရိယာများ မိတ်ဖက်ပြုနိုင်ပါသည်။
25+ နှစ်ကျော် ကုန်ပစ္စည်း...
မော်ဒယ်နံပါတ်- တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Manual Control Q4...
မော်ဒယ်နံပါတ်- တရုတ်ထုတ် Manual Control Y8...
မော်ဒယ်နံပါတ်- CBJ စီးရီး ဟိုက်ဒရောလစ် အပိုင်းအစ ဘေထုပ်ချိုး...
Jiangyin Unite Top Heavy Industry Co.Ltd. သတ္တုပြန်လည်အသုံးပြုစက်များ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2004 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာကို ချဲ့ထွင်ကာ 2012 ခုနှစ်တွင် စက်မှုဥယျာဉ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှန်ဟိုင်းမြို့နှင့် နီးကပ်သောကြောင့် အလွန်အဆင်ပြေသော လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပါသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ် စက်ပစ္စည်းများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းသည် သတ္တုအပိုင်းအစများ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ကားထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း၊ သံမဏိ အပိုင်းအစများကို ကြိတ်ခွဲခြင်းစသည်ဖြင့် ဆက်တိုက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စက်များအားလုံးသည် တင်းကျပ်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းမှထုတ်လုပ်ပြီး တည်ငြိမ်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော အစိတ်အပိုင်းပေးသွင်းသူများ၏အသုံးပြုမှုကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
1. ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တု baler ၏အလုပ်လုပ်သောစနစ်အတွက်မြင့်မားသောဆီအပူချိန်ကိုထိခိုက်စေသည်။ မြင့်မားသောဆီအပူချိန်သည် ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တု baler ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာစနစ်ရှိ ရော်ဘာဖျံနှင့်ရေပိုက်များ အိုမင်းခြင်း သို့မဟုတ် ယိုယွင်းလာမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးကာ ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပြီး ၎င်းတို့၏ တံဆိပ်ခတ်မှု ဆုံးရှုံးသွားသည့်တိုင်...
စျေးကွက်တွင် စွန့်ပစ်သတ္တု ဖဲချပ် အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။ ယေဘူယျအားဖြင့် ယေဘူယျသုံး ထုပ်ပိုးမှု၊ အလျားလိုက် လက်စွဲစာအုပ်၊ အလျားလိုက် အလိုအလျောက် ထုပ်ပိုးမှုဟူ၍ သုံးမျိုးရှိသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းဌာနတွင် စွန့်ပစ်သတ္တုကြိတ်စက်ကို မည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း။ ကိုယ်ပိုင်အသံအတိုးအကျယ်ကို ဆိုလိုတာပါ..။
အကန့်အသတ်နှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမဟုတ်သော တွင်းထွက်သယံဇာတများကြောင့် လူသားများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါ သယံဇာတများ အဆက်မပြတ် လျော့နည်းလာကာ သယံဇာတပြတ်လပ်မှုသည် လူသားများ တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်ရမည့် အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အဟောင်းနဲ့ အသစ် အစားထိုးတဲ့ ဖြစ်စဉ်...
စက်သည် အလုပ်လုပ်သောအခါ သိသာထင်ရှားသောတုန်ခါမှု မရှိသောကြောင့် အခြေခံအုတ်မြစ်အတွက် အထူးလိုအပ်ချက်မရှိပါ။ အသုံးပြုသူများသည် သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေအရ စက်ကို အိမ်တွင်း၌ထားနိုင်ပြီး သာမန်ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းကို လောင်းနိုင်သည်။ installation sequence တွင် host ကို firs ထားရှိသင့်သည်...
ဟိုက်ဒရောလစ်အက်ဆစ်သတ္တု baler ၏ပြိုကွဲမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။ ချို့ယွင်းချက်၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကြောင်းရင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး အမှား၏ နောက်ဆုံးအကြောင်းရင်းကို ရှာမတွေ့မချင်း အကြောင်းရင်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖယ်ရှားပစ်ပါ။ စိစစ်နိုင်ပါတယ်...
Y81 ဟိုက်ဒရောလစ် Baler, Pop-Top Can Baler ကိရိယာ, အပိုင်းအစ သတ္တုကြိတ်စက်, Leaf Compactor နှင့် Baler, Aluminum Foil Baler စက်, အိမ်လုပ်ကတ်ထူပြားဖဲချပ်,